नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : प्रधानमन्त्रीज्यू , तपाईं पनि कपुतहरूको काँध चढेर गोविन्द केसीजस्ता सपुतलाई मार्न लागिपर्नुभयो !
प्रधानमन्त्रीज्यू , तपाईं पनि कपुतहरूको काँध चढेर गोविन्द केसीजस्ता सपुतलाई मार्न लागिपर्नुभयो !
भूपि शेरचनले कुनै बेला असाध्यै भावनामा बगेर एउटा सर्वकालीन कविता लेखेका थिए –
त्यो कविताको मर्मले छोएरै हुनुपर्छ– मुलुकमा वर्षौंदेखि सपुतहरूलाई मारियो । कयौं सपुतहरूले तपाईंको 'नयाँ नेपाल' देख्नै पाएनन् । तपाईंको समृद्धि छुनै पाएनन् । तपाईंको पानीजहाज, मोनो र मेट्रो रेल चढ्नै पाएनन् । प्याट्ट बटन थिचेर ह्वार्रर ग्यास बाल्नै पाएनन् । किनकि, मुलुक कपुतहरूको हातमा गयो, हामी कपुतशासित भयौं ।
त्यही कविताको भावनामै बगेर हुनुपर्छ– तपाईं पनि कपुतहरूको काँध चढेर गोविन्द केसीजस्ता सपुतलाई मार्न लागिपर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू ! भूपिले गलत लेखेका थिए । मुलुक बन्न सपुत
होइन, कपुत नासिनुपर्छ ।
तपाईं सपुत बन्ने कि कपुत, अबका केही महिनाले बताउनेछन् । तपाईंलाई बोकेर हिँड्ने कपुतहरूको नियत मभन्दा बढी तपाईं आफैं बुझ्नुहुन्छ । मलाई ती कपुतहरूभन्दा तपाईं र मेरो मुलुकको बढी चिन्ता छ । यो नाशवान शरीर नासिनुभन्दा अघि नै मुलुकलाई नाश हुनबाट जोगाइदिनुस् ।
अर्को मनमा लाग्छ– तपाईंलाई यस्ता कुराले छुँदैनन् । तपाईं एकसिंगे गैंडा भइसक्नुभो । तपाईंले भन्नुहुन्थ्यो नि, "एकसिंगे गैंडा नेपालमा मात्रै पाइन्छ, अन्त पाइन्न ।"
तपाईंलाई सम्झना छ ? शेरबहादुर देउवाले चुनावताका आत्तिएर एकपटक भनेका थिए, "कम्युनिस्टको सरकार आयो भने त रुन पनि पाइन्न ।"
त्यतिबेला उनलाई उडाउनेमा म पनि एक थिएँ । अस्ति 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रमको प्रोमोमा तपाईंले पिलित्त आँशु झारेको देखेपछि चाहिँ देउवा फेरि पनि मेरो नजरमा गलत सावित भए । रुन पाइने रहेछ । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री नै रोएपछि कांग्रेस, मण्डले रुन नपाउने प्रश्नै हुँदैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री यति कोमल ह्रदयका छन् भन्ने देखेर मेरो मन पनि पग्लिएको थियो !
तिनै बन्द आँखा खोल्न एकजना बूढा अन्न नखाएर जुम्ला गएका थिए, तपाईंले गोली चलाएर बूढालाई अपहरण गरी काठमान्डू ल्याउनुभो । तपाईंलाई मनमनै 'यो बूढोलाई जितें' भन्ने लागेको होला । तर, तपाईंले हार्नुभो ओलीज्यू ! दुईतिहाइको सरकारलाई हल्लाएर हेलिकप्टरमा उडाउँदै जुम्ला पुऱ्याउन सक्ने गोविन्दले हारेका होइनन्, जितेका हुन् । तपाईं र तपाईंका आसेपासे केही दर्जन मान्छेबाहेक सिंगो देश उनको समर्थनमा 'माखेसाङ्लो' भएर जुटेको छ । एकपटक सामाजिक सञ्जालमा #IamWithDrKC टाइप गरेर खोज्नुस् त ! तपाईंका केही थान पवनपुत्र र बानरसेनाबाहेक सिंगो संसार तपाईंविरुद्ध छ ! तपाईं त वरिपरिका बानरसेना देख्दा हरेक क्षण खुशीले उन्मुक्त हुनुहुन्छ होला । ती बानरसेनाले तपाईंलाई रामबाट रावण नबनाऊन्, मेरो शुभेच्छा छ । यो पत्र पढेपछि ती बानरसेना एकपटक फेरि ममाथि खनिनेछन् । सत्यको पक्षमा एकजना बूढा ३ हप्तादेखि अन्न नखाई बाँचिरहेका त छन्, म गाली खाएर दुई-चार दिन हाँसीहाँसी बाँच्न सक्छु, केही छैन । यत्ति कामना छ– तपाईंका बाहुबली महेश बस्नेतज्यूको आँखामा यो पत्र नपरोस् !
तपाईंले पसिना होइन, पैसा बगाउनुभो, पैसामा बग्नुभो । त्यही पैसामाथि उभिएर दुर्गा प्रसाईंहरू भनिदिन्छन्, "अनशन गरेर मर्नेहरू मरिरहन्छन् । मर्न देऊ ।"
तपाईंले हरेकजसो भाषणमा भन्ने गर्नुहुन्छ, "सपना देख्नुपर्छ । मैले पानीजहाज, रेल, भू-उपग्रहको सपना देखेको छु ।"
हो प्रधानमन्त्रीज्यू ! सपना देख्नै पर्छ । सपनै नदेखे विपनाको पनि अर्थ हुन्न । तर, सपना देख्नका लागि सुत्नु पनि पर्छ । तपाईं पनि त सुतिरहनुभएको छ, त्यसैले मलाई तपाईंका सपनामा अलि धेरै विश्वास छ । तपाईंले ल्याउने रेल चढेर म एक-दुई घण्टामै घर पुगूँला भन्ने सपना मेरो पनि छ । तपाईंले कोठा-कोठामा पुऱ्याइदिने ग्यासको पाइपबाट भात, तरकारी पकाउने सपना मेरो पनि छ । त्यही ग्यासमाथि ताप्के बसालेर छोरोलाई दूध तताउने सपना मेरो पनि छ ।
तपाईंका गौरवशाली मित्र प्रचण्डज्यूलाई पनि यिनै गुनासा केरकार गरेर १७ महिनाअघि यस्तै पत्र कोरेको थिएँ । हामीले वर्षौंदेखि यस्ता गुनासाबाहेक अरु के नै पो गर्न सकेका छौं र ! बाटोको धूलो, सहरको मैलो, यातायातको दु:ख, खाद्यान्नको विषादी, कर्मचारीको ढिलासुस्ती– यस्तैयस्तै गुनासा गर्दैमा हाम्रो आधा जीवन बितिसक्यो । मनको यस्तै दु:ख बिसाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्ने युगमै छौं हामी अझै । विमानस्थल र सरकारी अस्पतालका चर्पी सफा भएनन् भन्दै @hello_sarkar गुहार्ने युगमै छौं हामी । पानीजहाज र रेलबारे सोच्ने फुर्सदै पाएनौं प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले ! यो देशमा केही उपायै केही नदेखेर अरब कुदेका युवा देख्दा तपाईंलाई लाग्दैन– देश 'समृद्ध' होइन, 'सम्वृद्ध' भइसक्यो, युवा रित्तिएर देश वृद्धै-वृद्धाले भरियो ? वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर घोषणापत्रमा लेख्नुभएको थियो । तर, वार्षिक साढे ५ लाख पासपोर्टमात्रै सिर्जना भए । त्यही थियो तपाईंको समृद्धि सपना प्रधानमन्त्रीज्यू ?
विद्यासुन्दरलाई टिकट दिएको पाप मोचन गर्न तपाईं आफैंले 'विकासको मूल' फुटाल्नुहुनेछ भनेर आशा गरिबसेको छु प्रधानमन्त्रीज्यू म । आशा गर्न र सपना देख्न पनि तपाईंले नै त सिकाउनुभएको हो । बेथितिमा शून्य सहनशीलता भन्नुहुन्थ्यो, हामीमा सुन्ने र सुनिमात्रै राख्ने सहनशीलता विकास भएकै त छ ।
अलि अस्ति देशभरिको सिन्डिकेट तोड्छु भनेर कस्सिनुभयो । एक-दुई दिन त्यसले सिंगो देश हल्लायो । ठग यातायात व्यवसायीहरू असिनपसिन भए । कोटेश्वरदेखि पूर्व चल्ने 'मयुर यातायात'को बहानामा छेडिएको सिन्डिकेटविरोधी अभियान केही दिनमै हावा खुस्किएको बेलुनजस्तै भयो । पछि अपुष्ट नै भए पनि खबर सुनियो–– मयुर यातायातमा त तपाईंकै बाहुबली महेश बस्नेत एन्ड कम्पनीको लगानी रहेछ । मयुरलाई पूर्वको रुटमा बाटो खुला गरिदिएपछि तपाईंको त्यो अभियान अहिले भेन्टिलेटरको बिरामीजस्तो भएको छ ।
यस्तो देख्दा मन भतभती पोल्छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ– तपाईंका भीमकाय योजना सुन्ने र पढ्ने सहनशीलता सम्भवत: अब ममा छैन । तीभन्दा बरु अनलाइनहरूका यौनजिज्ञासा र 'उमेर पचपन' टाइपका गसिपमात्रै पढिबसूँ ! हुन त इन्टरनेटमै पढिबस्न पनि त गाह्रो छ प्रधानमन्त्रीज्यू । इन्टरनेटमा लगाएको १३ प्रतिशत करले तपाईंको 'डिजिटल नेपाल' सपना साउन नलाग्दै उत्तानो पऱ्यो । सपना उत्तानो परेर त केही थिएन, फेरि अर्को सपना देख्न सकिन्छ । देशै उत्तानो नपरोस् ।
देश जोगाउने कि आसेपासे जोगाउने, सपुत जोगाउने कि कपुत जोगाउने, गोविन्द केसी जोगाउने कि दुर्गा प्रसाई जोगाउने– तपाईं आफू सपुत भएर युगौंयुगसम्म बाँचिरहने कि कपुत भएर मर्नुअघि नै हजारौं पटक मर्ने–– बेलुकी 'इमिनोसस्प्रेस्यान्ट' खाएर सुत्नुअघि एकपटक शान्त भएर सोच्नुहोला ।
चित्त दुखाएको भए कम्युनिस्ट नामधारी 'ठेट्नो' सम्झिएर पूर्व-पश्चिम रेलको डब्बाभित्र हुलेर पठाइदिनुहोला । बा-आमा नभेटेको एक वर्ष हुन लागेछ- रेलमा आएको छोरोलाई देखेर बूढाबूढी मुसुक्क हाँस्थे होला । तपाईंको कारणले कसैको अनुहारमा खुशी त छाउँछ :)
twitter.com/lendaai / Source: Barhakhari